लुकास भासकेस भन्छन्- फुटबल भए कोरोना बिर्सन सहयोग हुने थियो
नेपाल लाइभ आइतबार, वैशाख २१, २०७७, १६:५३
काठमाडौं- रियल मड्रिडका विंगर लुकास भासकेसले अहिलेको परिस्थितिमा केही समय भए पनि शान्ती पाउन फुटबल सुरु भए सहज हुने बताएका छन्। कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को पीडाबाट बाहिर निस्कन फुटबलले सघाउन सक्ने उनको भनाइ छ।
२८ वर्षका भासकेस बन्द रंगशालामा नै भए पनि फुटबल सुरु गर्दा घरमा बसेर हेर्नेहरुलाई पनि सहयोग पुग्नेमा देखिन्छन्। ‘पहिलो कुरा त सबै काम सुरक्षित रुपमा गर्नुपर्ने हुन्छ, सुरक्षाका उपाय अपनाएर यदि हामी खेल्न सक्यौँ भने त्यसले समाज र मानिसहरुलाई सहयोग नै गर्नेछ’ गार्जियनसँग उनले भनेका छन्।
ला लिगामा अहिलेसम्म २७ खेल सकिँदा ५८ अंकसहित बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा छ। दोस्रोमा रहेको रियल मड्रिडको ५६ अंक छ। अहिले स्थगित रहेको खेल कहिले हुने भन्ने यकिन छैन। २८ मे बाट खेलहरु गर्न सकिने बारे छलफल भए पनि अहिले नै केही भन्न सकिने स्थिति छैन।
रियल मड्रिडले अब अर्को हप्ताबाट अभ्यास सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा व्यक्तिगत रुपमा गरिने अभ्यासलाई परिस्थिति अनुसार सामूहिक रुपमा लगिने क्लबले जनाएको छ।
रियल मड्रिड र युभेन्टस बाहिरिए, म्यानचेस्टर सिटी र लायोन क्वार्टरफाइनलमा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिड र इटालियन क्लब युभेन्टस च्याम्पियन्स लिग अन्तिम १६ बाट बाहिरिएका छन्। शुक्रबार राति भएको अन्तिम १६ अन्तर्गत... शनिबार, साउन २४, २०७७
युभेन्टसमा रोनाल्डोको भर, च्याम्पियन्स लिगमा लायोनलाई हराउला? पहिलो लेगमा युभेन्टस लायोनसँग १–० ले हारेको थियो। त्यसबाट फर्किन युभेन्टसलाई अहिले आफ्नो मैदानमा अवसर रहेको छ। सिरि ए विजेता युभेन्ट... शुक्रबार, साउन २३, २०७७
फर्किएला रियल मड्रिड? के छ म्यानचेस्टर सिटीको योजना? म्यानचेस्टर सिटीले पहिलो लेगको खेलमा रियल मड्रिडलाई उसैको मैदानमा २–१ ले हराएको थियो। तर त्यसयता स्पेनिस लिग विजेता मड्रिडमा धेरै कु... शुक्रबार, साउन २३, २०७७